Abafundi bezobuthishela bekhombisa ngezitifiketi zabo zeBiological Science for Educators.
Abafundi bezobuthishela baphothule izifundo zabo zeBiological Science for Educators 420 ngenqunquthela yocwaningo nezokusebenza ebibanjelwe esikhungweni sase-Edgewood.
Ngalesikhathi lesifundo sifundise abafundi ukucwaninga ngeSayensi uma besebenza nemiphakathi. Inhloso yalenqunquthela bekukukhangisa ngocwaningo lwabafundi nabakufunde ekusebenzeni nemiphakathi, nokuqhakambisa ucwaningo olwenziwa abafundi nokubagqugquzela ukuba ngabacwaningi emagumbini abo okufundisa.
Izihloko ebezihamba phambili bezibheka kakhulu ukuxazulula izinkinga zempilo nenhlalakahle, ezendalo kanye nezinqinamba ezibhekene nabantu abakhubazekile ngezindlela ezahlukene.
Abaphathi abasebenza nabafundi ngesikhathi benza amaphrojekthi abo bebemenyiwe nabo kulenqunquthela. Bakujabulele ukuzimisela kwabafundi emsebenzini wabo baphinda bakujabulela ukuba yingxenye yalengunguthela.
Bathe lamaphrojekthi aveze ulwazi oluningi oluzobasiza nabo ezinkampanini zabo ngokuhamba kwesikhathi. ‘Akusikho nje kuphela ukuthi benzeni kodwa ukuthi bashiyeni ngemuva,’ kusho oyedwa wabaphathi.
Omunye wabaphathi uncome uNksz Seshni Naidoo ngomsebenzi wakhe nabantu abanesifo sokukhubazeka iCerebral Palsy. Uthe uNaidoo ubanikeze ukunakekela ngisho abantu ababagadayo abangenaso isikhathi sokubanikeza. ‘Lokhu kunikeze iziguli ugqozi kwaba nobungcono ekunyakazeni kwamalunga omzimba angasenhla okukhombisa ikusasa elihle lokunakekela abantu kulendawo,’ kusho umphathi.
Bekhumbula imisebenzi yabo bathe lesisifundo sibenze babuka izinto ngelinye ihlo sabenza bacabange ngezinye izindlela. Noma kubenezinqinamba, kodwa babe nokukhula emisebenzini yabo nasezimpilweni zabo.
UMnu Lungani Magwaza uthe lokhu kufanele kube yinto bonke abafundi abangakaqedi ukuba bayenze ngaphambi kokuba bathole iziqu zabo.
Bonke abafundi badlulisele ukubonga kwabo ngoxhaso abalutholile kumfundisi zobuthishela uDkt Angela James nomsizi wabafundi uNksz Anele Ndlovu.